त्यहाँ अर्को स्नान सिजन को खुल्नु अघि मात्र केही महिना थिए। महिलाहरु पानी शरीर मा आराम मा चमक पूर्णतया तयार हुन आवश्यक छ। फैशन Swimwear मोडेल बिकनी क्षेत्र राम्रो-groomed गर्नुपर्छ किन जो छ, यसको minimalism असर गर्छ। चिसो अवधि पनि चलाउन हुँदैन गर्दा। एक अंतरंग ठाउँमा अतिरिक्त वनस्पति पछि गंध हुन सक्छ। कसरी दाढी गर्न जलन र बच्न केटी ingrown hairs? यो विषय यस लेखमा मा छोयो गरिनेछ।
खैर, गरेको मिसिन कसरी दाढी सिक्न गरौं। सुरु गर्न, यो छुरा आन्दोलन बाल विकास कडाई जानु पर्छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। विपरीत दिशा मा एक हात चलिरहेको, को नाजुक छाला लागि हानिकारक हुन सक्छ। यो यस कारण छ र ingrown hairs संग inflamed क्षेत्रमा देखिन्छन्। यो आवश्यक छैन सुक्खा छाला वा खराब धमाकेदार मा दाढी उत्पादन हो। को तातो पानी उपचार पछि, शरीर पर्याप्त hydrated छ, सानो hairs एक सानो उठाएर, र आफ्नो हटाउने सजिलो हुन्छ। खैर, यदि लामो hairs छन्, त्यसपछि यसलाई राम्रो थोडा छोटो सुरु गर्न छ। अन्यथा, शेविंग एक यातना बन्नेछ। यस तयार मा बिकनी क्षेत्र , लागू शेविंग क्रिम यसको संरचना मा chamomile वा घ्यु हुनुपर्छ। यी घटक छाला soothe र क्षति रोक्न मद्दत गर्नेछ।
हामी ठीक घनिष्ठ ठाउँ दाढी कसरी मा महिला लाग्यो भने, यो महिला लागि विशेष मिसिन पर्छ। स्टोर को दायरामा हेर्न, कृपया मोडेल पढ्नुहोस्। बिक्री मा जो थप सुविधाहरू छन् आइटम, को एक किसिम हो। खरीद गर्दा तपाईंको छाला को प्रकार र के तपाईं मिसिन देखि चाहनुहुन्छ विचार गर्नुहोस्। यो तेज छुरा राम्रो कार्य सामना रूपमा नियमित रूपमा ब्लेड परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रक्रिया दुई पटक भन्दा कुनै मिसिन संग सम्पर्कमा आउन छाला को प्रत्येक क्षेत्र। तपाईं अतिरिक्त बाल हटाउने समाप्त भएपछि, तुरुन्तै ब्लेड सफा र राम्ररी कुल्ला।
प्रक्रिया पछि साइड इफेक्ट बच्न छाला मइस्चराइजर चिकनाना गर्न आवश्यक छ। यी जलन, ingrown hairs र राता समावेश गर्नुहोस्। यस्तो उद्देश्यको उपयुक्त hydrocortisone क्रीम लागि, पछि सबै rashes को आवेदन गायब। यसलाई प्रयोग गर्न छ दैनिक प्रयोग, तपाईं एक ब्रेक लिनुपर्छ। पनि राम्रो बेबी पाउडर, प्रशोधन पाउडर घनिष्ठ स्थान, तपाईं दाह बारेमा भूल गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा यो धकेल्न सक्नुहुन्छ, यो ज्यादा गर्न छैन।
शरीर को shaved क्षेत्रमा पनि नियमित स्वच्छ प्रक्रिया आवश्यकता छ भनेर नबिर्सनुहोस्। सफलता प्रमुख राम्ररी घनिष्ठ ठाउँ दाढी कसरी मात्र छैन निहित भनेर नबिर्सनुहोस्। होसियार र नियमित मर्मतका पनि कुनै सानो भूमिका खेल्छ। त्यसैले, कम्तिमा एक पटक एक दिन, तपाईं साबुन वा घनिष्ठ स्थानहरू जेल संग धुन गर्न आवश्यक छ। जब जलन वा कारण नाजुक छाला गर्न अवस्थामा, दैनिक आफ्नो बिकनी क्षेत्र दाढी छैन। केही महिला फोम एलर्जी, त्यसैले तपाईं प्रक्रिया को लागि suds प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
निस्सन्देह, समय अनुभव पनि आउँछ, त्यहाँ एक कौशल छ, र प्रश्न कसरी घनिष्ठ ठाउँ दाढी गर्न, उठ्न छैन। त्यसैले, राम्रो सल्लाह बेवास्ता छैन, प्रारम्भिक चरणको लागि तिनीहरूले अमूल्य हुनेछ। अनुपालन पनि हाम्रो शरीर मा एक धेरै कोमल ठाउँ छ किनभने, सुरक्षा भन्दा हुनेछैन।
हामी हाम्रो लेख आमाहरु लागि एक सानो सल्लाह निष्कर्षमा पुग्न। ठीक घनिष्ठ ठाउँ दाढी कसरी आफ्नो छोरी बताउन समय बढ्दै अप गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। किशोर अक्सर अचाक्ली हतार र केटी अनजानमै गल्ती गर्न सक्छ। आफ्नै मिसिन, फोम र प्रक्रिया व्याख्या गर्न आवश्यकता किन्न। तपाईं यस विषयमा एउटा लेख खोजी र यसलाई पढ्ने दिन चयन गर्न सक्नुहुन्छ। सायद केही लज्जित हुन, तर यो स्वतन्त्र प्रयोग भन्दा धेरै राम्रो छ गर्नेछ।
प्रसूति को जन्म इतिहास। सामान्य जन्म (पहिलो र दोस्रो)
Lactation नर्सिङ आमा कसरी वृद्धि गर्न? केही सुझावहरू
कसरी आफ्नो हातमा एक रूख बाहिर एक हतियार बनाउन
प्राप्त गर्ने क्षमता र ग्यारेन्टी: को ट्यांक मा ट्यांक को विश्व मा कोड
रोटरी कटर "डन": समीक्षा, विनिर्देशों
Hansgrohe शवर सिस्टम: सिंहावलोकन, वर्णन, सुविधा र समीक्षा
विद्रोही Bayazid, Suleiman को छोरा
पेशेवरों - यो हुनुहुन्छ? स्क्राच एक आईटी विशेषज्ञ कसरी बन्न?